izany amin’ny ankapobeny no hanaovana ireo fomba maro isam-paritra ho amin’ny fanajariana ny hasim-piandrianan’ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka. Fanao isan-taona eto Imerina ny Andro Fandroana ho fanandratana izany. Hiavaka ny amin’ity taona 2020 ity na ny andro na ny fomba fanatanterahana na ny fanehoana izany, tsy hisy mihitsy raha bangoina tokana ny fomba fandroana karakarain’ny tranoben’imerina. Antony, tsy fanandratana no hatao mandritra io vanimpotoana io fa kosa fiarovana manoloana ny areti-mandringana mitranga amin’izao fotoana, araka ny fanambaran’ny Mpitahiry ny Hasimpiandrianan’i Madagasikara ao amin’ny Tranoben’Imerina ao Ambohimanga Robert Randrianantoandro Andriamahary. Hifanaraka amin’izany fomba atao izany ihany koa ny fanaka masina avoaka ny Tranobe hifandrindra amin’ny vavaka atao. Efa hatry ny fahagola no nananan’ny foko tsirairay fanaka masina mifanaraka amin’ny zava-misy amin’ny tany sy ny fanjakana, hoy ny fanazavany, saingy tsy mateti-pivoaka izy ireo. Tsy tena mazava ny fandraisana andraikitra ataon’ny fitondram-panjakana mikasika ny fiarovana ny mety ho fidiran’ity tsimok’aretina ity eto Madagasikara ka izany no iantsoany an’ireo raiamandreny ara-drazana manerana ny nosy hampiasana ny hery ananan’ny tsirairay avy hiarahana miady amin’ity areti-mandringana amin’izao fotoana izao ity. Tsy manova ny tetiandro nambara tamin’ny fiatombohan’ny taona kosa ny zava-mitranga ankehitriny.